Dawladda Somaliland Oo Ka Hadashay Xasuuqii Rwanda oo 27 Jirsaday | Somaliland Post
Home News Dawladda Somaliland Oo Ka Hadashay Xasuuqii Rwanda oo 27 Jirsaday
Dawladda Somaliland Oo Ka Hadashay Xasuuqii Rwanda oo 27 Jirsaday
Hargeysa (SLpost) – Arbacadii Shalay waxa dalka Rwanda laga xusay 27 Guurada ka soo wareegtay Xasuuqii 1994-kii ka dhacay dalkaasi, kaasi oo lagu dilay boqollaal kun oo Qof.
Sannadkii 1994-kii, waxa Jabhado ay lahaayeen Qoomiyadda Huutoogu ku xasuuqeen illaa 800.000 oo Qof oo ka soo jeeda Qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Tuutsiga.
Xasuuqan oo socday 100 Maalmood, ayaa Jabhad ka soo jeeda Qoomiyadda Huutuuga oo ah Bulshada ugu badan Rwanda, waxay xasuuqeen 800,000 qof oo ka soo jeeda Tutsi, arrintaasi oo xilligaa dunidu aad uga qaylisay.
Jamhuuriyadda Somaliland oo sidaasi oo kale Dadkeeda ay u xasuuqday Dawladdii Milletariga ahayd ee Generaal Maxamed Siyaad Barre 1988-kii, ayaa ka hadashay Xuska 27-guurada Xasuuqii Qoomiyadda Tutsiga oo Arbacadii Shalay laga xusay Caasimadda Rwanda ee Kigali.
Qoraal kooban oo Wasaaradda Arrimaha dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland ku baahisay barta ay ku leedahay Twitter-ka, waxay ku sheegtay in Somaliland waayo-arag ku tahay Xasuuqa, sidaasi darteed ay Shacabka Rwanda la wadaagayso Xanuunka uu kaga tagay Xasuuqii dhacay 1994-kii.
“Somaliland waxay sida Rwanda Waayo-arag u tahay Natiijada Xanuunka leh ee Dagaalka sokeeye iyo Xasuuqa.” Ayaa lagu sheegay Qoraalka Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Somaliland baahisay.
Qoraalka Wasaaradda Arrimaha dibedda Somaliland oo lagu socodsiiyey Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Rwanda, ayaa waxa kale oo lagu sheegay in Somaliland ay Rwanda la kaashanayso dhismaha Mustaqbal ifaya oo loo sameeyo Bulshooyinka labada dhinac.
“Somaliland waxay Rwanda la kaashanaysaa Dhismaha Mustaqbal Ifaya oo Barwaaqo u horseeda Dadkooda Walaalaha ah..” ayay qoraalkeeda sii raacisay Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Somaliland.